माल्दिभ्सलाई हराउँदै नेपालले नयाँ इतिहास लेख्ला ? यस्तो छ २ टोलीको विगत « Today Khabar
माल्दिभ्सलाई हराउँदै नेपालले नयाँ इतिहास लेख्ला ? यस्तो छ २ टोलीको विगत
प्रकाशित २७ भाद्र २०७५, बुधबार ०८:४८
काठमाडौं, भदौ २७ । ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि आज नेपालले माल्दिभ्सको सामना गर्दै छ । बंगलादेशमा जारी दक्षिण एसियाली फुटबल, साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाली टोलीले आज माल्दिभ्सलाई हराउन सके ऐतिहासिक किर्तीमान कायम हुनेछ । हालसम्म साफको फाइनलसम्म पुग्न नसकेको नेपाली टोलीका लागि माल्दिभ्ससँगको खेल इतिहास रच्दै उपाधि यात्रामा अघि बढ्ने बलियो खुड्किलो बन्न सक्छ ।
नेपाल समूह ‘ए’ को विजेताका रुपमा तथा माल्दिभ्स समूह ‘बी’ को उपविजेताको रुपमा अन्तिम चारमा आएका हुन् । नेपालका प्रशिक्षक तथा खेलाडीले यसपटक इतिहास लेखाउनका लागि प्रयास पनि गरिएको र अवसर पनि मिल्दै गएको बताएका छन् । माल्दिभ्ससँगको खेल त्यसको कडी बन्नेमा विश्वास गरेको उनीहरुको भनाई छ । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो पौने चार बजेपछि सुरु हुनेछ ।
सन् १९९३ देखि सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल अहिलेसम्म फाइनल पुग्न सकेको छैन । यस प्रतियोगिताको इतिहासमा नेपालले माल्दिभ्सलाई हराएको छैन । तर यी दुई टोलीबिचको भिडन्त जहिले रोमाञ्चक रहँदै आएको छ ।
नेपाल र माल्दिभ्स साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलोपटक सेमिफाइनलमा भिड्न लागेका हुन् । माल्दिभ्स एक पटकको विजेता र तीनपटकको उपविजेता हो । पाँच पटक सेमिफाइनलमा रोकिएको छ । पछिल्ला तीन संस्करणमा लगातार सेमिफाइनल पुगे पनि त्यसभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाल पनि समग्रमा पाँचौँ पटक सेमिफाइनल पुगेको हो । यसअघि सन् १९९५, १९९९, २०११ र २०१३ को साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो।
साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल र माल्दिभ्स पहिलोपटक सन् १९९९ को संस्करणमा भिडेका थिए । त्यसअघि पहिलोपटक सहभागी हुनेक्रममा सन् १९९७ को साफ च्याम्पियनसिपमा फाइनल पुगेको माल्दिभ्सलाई फेरि पनि उपाधि दाबेदार मानिएको थियो ।
पहिलो खेलमा श्रीलंकालाई ३-२ गोलले हराएको नेपाल माल्दिभ्ससँग पहिलो मिनेटमै पछाडि परेको थियो । हरि खड्काले ६५ औँ मिनेटमा खेल बराबरीमा ल्याएपनि मालदिभ्सले लगातार दुई गोल गर्दै खेलमा ३-१ गोलको अग्रता लिएको थियो। खेलको अन्तिम समयमा नेपालले एक गोल गरेपछि मालदिभ्सलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। पछि तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा पनि यी दुई टोली भिडेका थिए। त्यसमा मालदिभ्स २-० गोलले विजयी भएको थियो।
सन् १९९९ पछि आयोजित अर्को संस्करणमा पनि नेपाल र माल्दिभ्स समूह चरणमै भिडेका थिए। सन् २००३ मा आयोजित त्यस संस्करणमा माल्दिभ्सले नेपाललाई ३–२ गोलले हराएको थियो। पाँचवटै गोल दोस्रो हाफमा भएका थिए। ५६ औँ मिनेटमा नेपालले अग्रता लिएको थियो निराजन रायमाझीको गोलमा। तर त्यसपछि मालदिभ्सले लगातार ३ गोल र्गयो।
६३ औँ मिनेटमा खेल बराबरीमा ल्याएको मालदिभ्सले ७५ र ८५ औँ मिनेटमा गोल थपेको थियो। नेपालले ९० औँ मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गरेपछि खेलमा माल्दिभ्स एकाएक दबाबमा आएको थियो। सन् २००९ को साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो चरणको पहिलो खेलमा नेपालले माल्दिभ्ससँग खेलेको थियो।
त्यसभन्दा एक वर्षअघि श्रीलंकासँग मिलेर आयोजना गरेको संस्करणमा माल्दिभ्स विजेता नै बनेको थियो। त्यसबेला मालदिभ्सले नेपाललाई समूह चरणमा ४(१ गोलले हराएको थियो। तर यसपटक बंगलादेशमा आयोजित प्रतियोगितामा नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन र्गयो र माल्दिभ्सलाई १–१ गोलको बराबरीमा रोक्यो।
६१ औँ मिनेटमा माल्दिभ्सले अग्रता लिएको थियो। तर त्यो तीन मिनेट पनि कायम रहन सकेन। ६४ औँ मिनेटमा नेपालका जुमानु राईले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। माल्दिभ्स र नेपाल फेरी समूह चरणमा भेटे, संस्करण थियो सज् २०११ को। नेपालले पहिलो खेलमै माल्दिभ्ससँग खेल्नुपर्ने थियो। माल्दिभ्सले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा अग्रता लियो।
तर दोस्रो हाफको सुरुवातमै नेपालले खेल बराबरीमा ल्यायो। रक्षक सन्दीप राईले ५१ औं मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काएका थिए। त्यस संस्करणमा नेपाल एक जित र दुई बराबरीको नतिजासहित समूह उपविजेता बनेर सेमिफाइनल पुग्यो।
नेपाल साफ च्याम्पियनसिपमा सेमिफाइनल पुगेको यो १२ वर्षपछि थियो। तर सेमिफाइनलमा अफगानिस्तानसँग अतिरिक्त समयमा १–० गोलले पराजित भयो। त्यसयता नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा माल्दिभ्सको सामना गर्नु परेको छैन। -देश सञ्चारबाट